Indlela yokufaka amawindi womqambi - [Ukubonisana kwamazwe ngamazwe]
> Indlela yokufaka amawindi womqambi
2018-09-13 2019-04-01 Ukubonisana kwamazwe ngamazwe Iwebhu
Indlela yokufaka amawindi womqambi : PHP Composer faka amawindi
Faka i-xampp kumawindi angu-10
Amafayili wokulanda umqambi
Windows faka Umculi
Umyalo wokufaka umculi
Hlola ukufaka ngokushesha
Isinyathelo sokuqala ukufaka i-xampp, enye yezindlela ezingcono zokukhokha nge-PHP ku-Windows. Izidingo zomculi php zihlangene nezinguqulo zakamuva ze-xampp kumawindi angu-10.
Ama-app angeziwe nge-10 64 bit
Bese, landa Umqambi weWindows, ohlinzeka ngokusebenza ngokusebenza. Umqambi ungumtapo wolwazi ophethe ukuxhomeka kwe-PHP.
Ukusebenzisa Umqambi, kulula ukusebenzisa amabilabhu akhona, njengoba ezofaka ngokuzenzakalelayo futhi avuselele ukuthembela okudingekayo - konke okumele ukwenze ukuqala lesi senzo.
landa amafasitela womqambi
Sebenzisa isixhumanisi esinikeziwe, bese ulandela ifayela elifakiwe le-binary ye-Windows. Ukulanda kufanele kube mfushane, njengoba ifayela lincane kakhulu. Yenza ngokulandelwa kanye.
Indlela yokufaka amawindi womqambi : Landa i-Windows Composer
Ukufakwa kufanele manje kuqalile, ungaboni imodi yonjiniyela esikrinini sokuqala, ngaphandle uma wazi ukuthi wenzani.
Uma ngabe kufakwe ngaphezulu kwe-php eyodwa, noma ayifakiwe kufolda ejwayelekile, nansi ithuba lokuliguqula. Lesi sinyathelo sibaluleke kakhulu, njengoba i-executable izosetshenziselwa ukuqala i-PHP.
Indlela yokufaka amawindi womqambi : Khetha indlela ephumelelayo ye-PHP
Kungenzeka ukuthi unqamule lesi sinyathelo, ngaphandle uma ungafinyeleleki kwi-intanethi ngokuqondile - lapho kungenzeka ukuthi uyazi ukuthi ungenzani lapha, ngokunikeza i-URL yommeleli.
Indlela yokufaka amawindi womqambi : i-proxy url yomqambi
Konke kufanele kube kuhle manje - izilungiselelo zazingekho nzima =) Ungaqhubeka nokufaka.
Indlela yokufaka amawindi womqambi : Amafrikhi alungele ukufaka
Ukusetha komhleli kufanele kuphele ngaphandle kwezinkinga, sekuyisikhathi sokuqeda ukufakwa bese uqala ukuyisebenzisa!
Indlela yokufaka amawindi womqambi : Umqambi ufakwe ngempumelelo
Bona ukuthi ungafika kanjani ku-cmd ngokushesha, usebenzisa i-Win + R yokushoda kwekhibhodi (emele i-Windows Run), futhi kukhona uhlobo oluthi "cmd" lomyalo, ukuvula umyalo wokulayezo.
Indlela yokufaka amawindi womqambi : Indlela yokukhuthaza i-cmd
Ngesinye isikhathi esheshayo, mane uthayiphe "umqambi" bese ucindezela ukungena.
Uma ukufakwa kugcwaliswe ngempumelelo, kufanele manje ubone i-Composer logo kanye neminye imiyalo yokuthi ungayisebenzisa kanjani - yebo, Umculi ikakhulukazi uhlelo lomugqa womyalo.
Indlela yokufaka amawindi womqambi : Umshini wokugcina nomlobi
Faka Umqambi ku-Windows nge-XAMPP
I-XAMPP yinkqubo yamafasitela kufaka phakathi iseva yewebhu ye-Apache, uhlelo lokuphathwa kwedatha ye-MySQL, nolimi lwezokuthuthukiswa kwewebhu le-PHP.
Ngesibonakaliso esihle somsebenzisi sokuqhafaza ukuphatha zonke izinhlelo ezingenhla, i-XAMPP ivumela ukuqhuba iseva yewebhu ku-Windows, ngaphandle kokufaka ngesandla zonke izingxenye ezidingekayo.
Ama-app angeziwe nge-10 64 bit, faka amawindi womqambi, indlela yokufaka umqambi, umxokozelo wokuqamba, faka i-xampp, Kuyini i-xampp, Faka i-xampp kumawindi angu-10, umqambi wokulanda amawindi, landa amawindi womqambi, amafasitela afaka umqambi, umqambi ufake umyalo, amafasitela alungile, php umqambi faka amawindi, izidingo ze-php zomqambi, indlela yokufinyelela ku-cmd ngokushesha, i-proxy url yomqambi, xampp kumawindi angu-10, Yini i-xampp eyenzayo, umqambi wokuqamba, indlela yokusebenzisa i-cmd,